प्रधानमन्त्री बन्ने सुरसारमा प्रचण्ड, सबैलाई मात ख्वाउन जोडका साथ तयारी ! - Compaq News
प्रधानमन्त्री बन्ने सुरसारमा प्रचण्ड, सबैलाई मात ख्वाउन जोडका साथ तयारी !
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउने चुनावमा वामपन्थीको पहिलो पार्टी सम्भावना रहेको बताएका छन् । देशको दोस्रो र वामपन्थीको पहिलो पार्टी बने देशको बागडोर आफूहरुको हातमा आउने उनले बताए ।
प्रचण्डले एमसीसी र एसपीपीमा नेकपा एमालेले राष्ट्रघात गरेको आरोप पनि लगाए ।
पुर्व प्रधानमन्त्रि तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह निर्वाचनमा सोचेअनुसारको परिणाम नआएको बताएका छन् ।
बिहीबार ललितपुरका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले १७०–१७५ सिट ल्याउने आफूहरूले अनुमान गरे पनि १२२ सिटमा खुम्चिनुपरेको बताए । स्थानीय तह निर्वाचनबाट दोस्रो पार्टी बन्ने आकलन गरिएको समेत उनले सुनाए ।
प्रचण्डले माओवादीले ३० पालिकासम्म जित्छ भनेर प्रचार गरिएको उल्लेख गरे । माओवादीको धेरै सिट आयो भनेर बुर्जुवाहरूले जिब्रो टोकेको उनको भनाइ छ ।
प्रचण्डले निर्वाचनमा आफैँ जित्ने गरी बलियोसँग लाग्न निर्देशन दिए । “आफ्नो बलियो तयारीमा ध्यान दिनुस् । आफ्नै संगठन सुदृढ गर्न लाग्नुस् । सदस्यता बढीभन्दा बढी बढाउनुस्,” उनले भने ।
उनले संगठन विस्तारको कामलाई योजनाबद्ध ढंगले रातदिन खटेर गर्न पनि निर्देशन दिए ।